Dadaallo lagu soo celinayo xiriirka Somaaliya iyo Kenya oo socda | KEYDMEDIA ONLINE
Dadaallo lagu soo celinayo xiriirka Somaaliya iyo Kenya oo socda
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay socdaan dadaallo ay Dowladda Qatar gar wadeyn ka tahay oo mar kale dib loogu soo celinayo xiriirka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa warbaahinta u sheegay in uu socdo dedaal meel fiican maraya oo dib loogu soo celinayo xiriirkii xumaaday ee Dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya.
Wasiir Maxamed Cabdirisaaq, wuxuu qiray inuu hore labada dal u yimid ergay siday fariin ka socotay amiirka Qatar, taas oo u jeedkeedu ahaa xal u helidda arrimaha la isku maan-dhaafsan yahay, isla markaana labada dal aqbaleen dib u soo celinta xiriirka diblumaasiyadeed.
Wasiirka oo ka gaabsaday inuu sheego, waxa mar labaad la isku maan dhaafay, ayaa hadana xusay in dadaallo socdaan kuwaas oo lagu raadinayo xalka khilaafka labada dhinac.
Mar wax laga weydiiyay dadaallada xal u raadinta ee socda, ayuu yiri, “waxa aan kuu xaqiijinayaa in uu dedaalkaas socdo Isla markaana wax waliba aysan ahayn sida uu warka u jiro run u wada yihiin ama been u wada yihiin”,.
“Soomaaliya iyo Kenya waligood waxay ahaan doonaan daris, laakiin waligood ma ahaan karaan col, marka ay ku haboon tahay ayuu xiriirku ku noqon doonaa meeshii loogu tala galay, laakiin waa in loo maro waxa ay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ku saleysan tahay” ayuu sidoo kale yiri Wasiir Maxamed Cabdirisaaq.